Ungazenza njani izipho kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 236
Iphepha lakho le-Instagram lifuna ukutyhala ukufikelela kwinani elikhulu labalandeli, ukuthandwa kunye nethuba lakho lokuthengisa umxholo wakho, iimveliso kunye nabanye, unokunika ithuba lokwenza ukupha phucula ubudlelwane bakho nabaphulaphuli bakho kunye neakhawunti yakho ye-Instagram
Ngokuqinisekileyo uzibonile izipho kwi-Instagram mihla le, into elula efuna kuphela iimeko ezithile, njengokuthanda, ukwabelana kunye nokumakisha abasebenzisi aba-2 okanye nangaphezulu. Ukhe wathatha inxaxheba, okanye okona kulungileyo, uphumelele kuzo.
Kukho uluntu olukhulu ekukhangekeni kwezi ntlobo zonikezelo, ngakumbi ukuba imveliso yakho, ukubetha ngenani elikhulu labantu, ke qhubeka, kwaye uzilungiselele ukuthatha inyathelo lokwenza ngokwakho ukuphucula kunye nokufaka eyakho metrics yokunxibelelana nabanye abasebenzisi kwi-Instagram
Isiseko kunye nemithetho yeZibonelelo kwi-Instagram
Thatha ingqalelo ukuba i-sweepstakes kwi-Instagram, kunye nayiphi na inethiwekhi yezentlalo izixhobo zokwazisa ngexesha elincinci ukuba bathathe inxaxheba kubo. Isebenza ngokufana nelothari, ekuya kuthi emva kwexesha elimiselweyo sizobe ophumeleleyo ngokusebenzisa isicelo.
Eyona nto ilungileyo kukusoloko unika iziphumo bukhoma, kunye nokwabelana ngesicelo esinye sokubamba igama lomsebenzisi kuwo onke amagqabantshintshi opapasho. Kungenxa yoko le nto kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwi-Instagram, kuba, nge amabali, isondo, ukuya kuthi ga Live yesicelo, iyakusivumela ukuba sinike amabhaso ngokusemthethweni.
Uyilungiselela njani into oyinikileyo kwi-Instagram?
Ngaphambi kokuba uqale unike isipho, qinisekisa ukuba uyakwazi ukuhlangabezana nale miqathango ukwenzela ukuba unxibelelwano luhle kangangoko. eluncedo ngakumbi kuwe.
Iakhawunti yakho yabelana ngenani elikhulu labalandeli, ungacebisa inani eliphakathi kwama-250 ngokutsala okuncinci, okanye ngaphezulu kwe-1000 kwinto enomtsalane kakhulu. Khumbula ukuba, ngexesha lokutsala, eli nani ngokwendalo Khwela kuyo ngokwemiqathango yedraw.
Sebenza nenye iakhawunti ukuba kunokwenzeka, ukuba uyinkampani, zama ukufumana isikhuthazi okanye iakhawunti yobuqu ekunyukeni, kwaye ngokuchaseneyo ukuba yiakhawunti yakho yobuqu. Iluncedo kuni nobabini njengoko oku kuya kutsala kwaye kumanyanise abaphulaphuli bakho.
Zama intsebenziswano epheleleyo, inkampani yefashoni kunye nempahla iya kuba nezibonelelo ezinkulu kumsebenzisi omxholo wakhe usekwe kubuso, izimbo zempahla kunye nobuhle.
Ukuba unokubakho, yenza amabhaso esibini kwesona siphambili, ukuze ukwazi ukwenza unxibelelwano nabasebenzisi nethuba lokufumana amabhaso amaninzi.
Nika phakathi kweentsuku ezintlanu ukuya evekini ukuba uthathe inxaxheba, uxinzelelo lwexesha luya kunyanzela abalandeli bakho ukuba babelane nabahlobo babo ngokukhawuleza banamathuba amaninzi okuphumelela.
Izibonelelo ze-Instagram Giveaways
Ukongeza ekwandiseni inani labalandeli, kukho izibonelelo ezininzi ezinje ngokuba iqonga le-Instagram lazisa a tyhala kwi Nxaxheba kwiphepha, unika ithuba lokuba upapasho lwakho oluqhelekileyo luvele kulondlo lwabasebenzisi, nokuba bangabalandeli okanye hayi.
Uya kuba nethuba lokuba ezinye iiakhawunti ze-Instagram, uqhakamshelane nawe ukuba ujoyine kwaye upapashe ukuzoba kwabo, ekuvumela ukuba ube nolunye ungeniso lwabalandeli kunye nezimvo, ngaphandle kokunikezela kwisipaji sakho okanye emsebenzini ukuze unikezele ibhaso kwabo baphumeleleyo.
1 Isiseko kunye nemithetho yeZibonelelo kwi-Instagram
2 Uyilungiselela njani into oyinikileyo kwi-Instagram?
3 Izibonelelo ze-Instagram Giveaways
Ndingamamkela njani kwi-twitch?